पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील बर्खास्त, फर्कियो गोविन्द पोखरेलको ‘पासा’ – YesKathmandu.com
बुधबार २७, पुष २०७३
अन्ततः काग्रेसको प्रतिष्ठाको विषय बनेका प्रा डा गोविन्द पोखरेललाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सरकारले नियुक्त गरेको छ ।
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्धार बनेर पराजय बेहोरेका पोखरेललाई नै पुन अध्यक्ष बनाउन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चर्काे दबाब दिएको थियो । सोही दबाबका कारण नियमित रुपमा बिहिवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक बुधकारका लागि सारेर पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख बनाइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाएको छ । ज्ञवालीलाई हटाउँदै सरकारले गोविन्द पोखरेललाई नयाँ सीईओमा नियुक्त गरेको छ । दुईपटक लिइएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई अवकास दिइएको हो ।
सरकार फेरिएसँगै सीईओ हटाउन सत्तारुढ कांग्रेसको दबाब चर्को थियो । कांग्रेस निकट पोखरेल यसअघि पनि प्राधिकरणको सीईओ भएका थिए । तर, समयमै ऐन नबन्दा प्राधिकरणले काम सुरु नगरी उनी स्वतः हटेका थिए । पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका छन् ।
यता,सरकारले हटाएका सुशील ज्ञवालीले भने न्यायको खोजीमा अदालतको ढोका ढकढकाउने तयारी गरेका छन ।
कर्मचारी वृत्तमा अझैं दुई वर्ष यी ‘बूढा’हरुकै जगजगी !
यस्ता छन आजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु
विनोद चौधरीका छोरा राहुलको विवाह खर्च ८० करोड !
प्रचण्डको अफ दी रेकर्ड गफ भारतीय दुतावासमा पुगेपछि रअ र ऋषि धमलालाई तनाव
तालको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर
कस्को इशारामा चल्दैछन प्रधानमन्त्री देउवा ? पाँचौ पटक निर्वाचनको मिति सार्ने भित्रभित्रै तयारी
शनिबारबाट ग्याँस बिक्री शुरु हुने
माओवादी सिद्धाउने ‘रअ’को यस्तो रहेछ चालबाजी !
मलेसियाबाट नवराज सिलवालले भने, ‘जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि हुँ,म भाग्ने मान्छे होइन’
मनास्लु पदमार्ग दसैँअघि खुलाउन ५० लाखको बजेट विनियोजन
संसदमा कांग्रेसले बाजी मार्‍यो, बजेट सुचना चुहावट छानविन गर्न समिति गठन
पुनःनिर्माणका कामलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड
प्रदेश १ र ४ को प्रदेश अधिवेशन सुरु हुँदै
उर्जा मन्त्रीले गरे तीन जनालाई बखास्त, तीन जना नियुक्त